ဟုတ်ပါတယ်! Free Fire မှာ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်လေးတွေ သင်မွေးပြီး ပန်းခြံထဲမှာ စိတ်လှုပ်ရှားစွာ လမ်းလျောက်သွားနိုင်ပါတယ်။ | Codashop Blog MM
Home Games Free Fire ဟုတ်ပါတယ်! Fr...
ဟုတ်ပါတယ်! Free Fire မှာ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်လေးတွေ သင်မွေးပြီး ပန်းခြံထဲမှာ စိတ်လှုပ်ရှားစွာ လမ်းလျောက်သွားနိုင်ပါတယ်။
သင်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လေးများကို ချစ်ပါသလား? Gerena အဖွဲ့ ကလည်း သင်နဲ့ ထပ်တူ ခံစားရပါတယ်။ ဒီတိရစ္ဆာန်လေးတွေက ချစ်စရာကောင်းရုံတင်မကဘဲ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ ဒီအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လေးတွေဟာ သင့်ရဲ့ Characters တွေနဲ့အတူတကွ လိုက်ပြီး ပွဲတွေကို အနိုင်ရအောင် ကူညီပေးပါတယ်။ သူတို့ကို သင်ရှိနိုင်သော Skinများနဲ့လည်း စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်ပါတယ်။ ဒီ ပိုစ့်မှာတော့ ဂိမ်းမှာ သင်လိုအပ်တဲ့ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်လေးအမျိုးမျိုး နှင့် သူတို့ရဲ့ စွမ်းရည်များကို ဘယ်လို ဖွင့်ရမယ် ဆိုတာကို သိအောင်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
လောလောဆယ် ဂိမ်းမှာတော့ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လေး ၁၁ ကောင်ရှိပါတယ်။ သူတို့ကို နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ရယူလို့ရပါတယ်။ အလွယ်ကူဆုံးနည်းကတော့ Diamonds ကိုသုံးပြီး ဂိမ်းရဲ့ဆိုင်မှာ ၀ယ်ယူလို့ရပါတယ်။ စျေးနှုန်းတွေကတော့ ၂၉၉ မှ ၆၉၉ အထိ ရှိပါတယ်။ ဂိမ်းရဲ့ပင်မစာမျက်နှာမှာ ရဲ့ ဘယ်ဘက်ခြမ်းမှာရှိတဲ့ Store အိုင်ကွန်ကို ရှာပါ။ ညာဘက်ရှိတဲ့ Pet Tab ကိုနှိပ်ပါ။ ထို့နောက် ဝယ်ယူနိုင်သော အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်စာရင်းကို သင်တွေ့မှာပါ။ (*အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်အားလုံးကိုတော့ ဆိုင်မှာ မရနိုင်ပါ။ )
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လေးများကို ငွေဖြည့်သည့် အစီအစဉ်များမှလည်း အခမဲ့ရယူနိုင်ပါတယ်။ ဒီနည်းရဲ့အားသာချက်ကတော့ Diamonds များလည်းရရှိသလို အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လေးများကိုလည်း အခမဲ့ ရရှိနိုင်တာဘဲဖြစ်ပါတယ်။
Special Airdrop များတွင် တိရိစ္ဆာန်များနှင့် အတူအခြားပစ္စည်းများလည်းပါဝင်ပါသည်။ Store မှ တိုက်ရိုက်ဝယ်ယူမှု နှင့်မတူဘဲ ဒီ Airdrop ကပိုတန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ကရဖို့ခက်တော့ အမြဲစောင့်ကြည့်ဖို့တော့ လိုအပ်တယ်နော်။
နာမည်ကိုဖတ်လိုက်တာနဲ့ သိနိုင်သလို Orrero ကတော့ လက်ရှည်အမိုက်စား နဲ့ နားကျပ်ကို နားမှာတပ်ဆင်ထားတဲ့ ဖက်ရှင်ကျကျ ဖျံလေးဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ နှစ်ဆဖြစ်တဲ့ Blubber Skill ကတော့ Medkit ဒါမှမဟုတ် Treatment Gun ကတော့ တိုက်ခိုက်ချိန်မှာ ကစားသမားတွေရဲ့ EP ကိုထိန်းထားနိုင်ပြီး အသုံး၀င်ပါတယ်။ ပြန်လည်ရနိုင်တဲ့ EP ကတော့ HP ရဲ့ 35% ကို Heal နေချိန်တွင် ပြန်လည်ရယူနိုင်ပါတယ်။
ဒီဓားရှည်ကို ကိုင်ဆောင်ထားတဲ့ မြေခွေးကတော့ အားလုံးတော်တဲ့ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်ဖြစ်ပြီး ကစားသမားအများစုနှင့် လည်းတွဲဖက်အဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ HP ကိုတိုးမြှင့်ဖို့လာတဲ့အခါ Spirit Fox ကရှေ့တန်းက ဖြစ်ပါတယ်။ Well Fed စွမ်းရည်ကတော့ Health Pack များ အသုံးပြုသောအခါ Level5ရောက်ရင်4HP ပိုတိုးစေပါတယ်။
ကြောင်လေးလို နားရွက်ရှိတဲ့ စက်ရုပ်လုံးလုံးလေး? ဒီအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ဟာ သူ့ရဲ့ထူးဆန်းတဲ့အသွင်အပြင်အပြင် Gloo Wall ကိုတော်တဲ့ ကစားသမားတွေအတွက် အသုံးဝင်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ Wall Enforcement skill က Gloo Wall အတွက် အကာအကွယ်အကာအရံတစ်ခု ဖန်တီးပေးပြီး Robo လေးအား HP အပိုရစေပြီး ဖျက်ဆီးရန်ခက်ခဲစေပါတယ်။
Kung-Fu ပန်ဒါ မဟုတ်ပေမယ့် စုံထောက် ဖြစ်ပါတယ်။ ။ ပန်ဒါသည် Rush ကစားသမားများအတွက် တွဲဆော့ဖော်ဘဲဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ Skills ၊ Panda ရဲ့ ကံကောင်းမှု ၊ သူက ရန်သူကို အောင်မြင်စွာ သတ်ပြီးနောက် Healing Effect ကောင်းကောင်းပေးတယ်။ ဒါကြောင့်တက် Level မြင့်လေလေ သူရဲ့ effect က မြင့်လေလေ ။ Panda ကို Jota နဲ့တွဲပြီး စမ်းဆော့ကြည့်ပါ။ ဒီ Panda လေး တကယ်လုပ်နိုင်တာကိုကြည့်ပါ။
Doge ချစ်သူတွေ အတွက်ကတော့ ။ Shiba (Akita လား? 😊) ကတော့ အနံ့ခံ အရမ်း ကောင်းပါတယ်။ သူရဲ့ Mushroom Sense Ability ကတော့ ပတ်၀န်းကျင်မှာ​ရှိတဲ့ အသက်ကယ် မှိုတွေကို မြေပုံပေါ်မှာ မှတ်ပေးပါတယ်။ ဒါကတော့ EP တိုးမြှင့်ဖို့ မှိုရှာဖွေနေတဲ့ (campers များမှလွဲလို့။ ) ကစားသမားများ အတွက်အကျိုးရှိတယ်နော်။
ဟုတ်ပါတယ် တို့တွေရဲ့ feline ကို့ ချစ်မြတ်နိုးတဲ့သူ ။ Kitty က သင်ရဲ့ပင်တိုင် ကြောင်တစ်ကောင်ဖြစ်ပြီး ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပါ ။ သူ့ရဲ့ ထူးခြားတဲ့ စွမ်းရည်ကတော့ ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး။ သင်သွားလေရာနောက် တစ်ကောက်ကောက်လိုက်တာဘဲရှိပါတယ်။ သူမကတော့ စစ်တိုက်နေစဉ်အတွင်း သင့်ရဲ့ ပင်ပန်းမှုကို ပြေပြောက်စေပါတယ်။ Kitty နှင့်အတူ Reign Supreme ဖို့ တစ်ခြားဘာအကူအညီ မှ မလိုကြောင်း ပြသလိုက်ပါ။
ရန်သူတွေကိုခြိမ်းခြောက်ချင်ရင် စက်ရုပ်ကြောင်ရိုင်းကတော့ အကောင်းဆုံးပါ။​ဒါတွင်မကပါဘူး သူ့ရဲ့ Weight Training Ability ကတော့ သင်၏ ပစ္စည်းထားစရာနေရာကျယ်အောင်လုပ်ပေးမှာပါ။ သင်တွေ့သမျှအရာအားလုံးကို ကောက်ယူချင်လျှင် ဤ Droid ကိုရယူပါ။ နေရာထားစရာပိုကျယ်အောင် သူ့ Level ကို မြှင့်ပါ။
ဒီအကောင်လေးကိုတော့ Kitty​ ရဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အဖြစ် သုံးပါ။ သူ့မှာ ဘာ Skill မှ မရှိပေမဲ့ Battle မှာ အားကြီးသလို မြင်စေပါတယ်။ သူကို Pro တွေက အသုံးပြုပြီး တစ်ခြားဘာ အပိုမှ မလိုဘဲ ဂိမ်းကိုနိုင်နိုင်ကြောင်းပြလိုက်ရအောင်။
ဂိမ်း အစပိုင်းမှာ ဒီ အစွမ်းထက်တဲ့ Falcon ကကောင်းပါတယ်။ Skyline Spree Ability က လေယာဉ်ပေါ်မှဆင်းလာတဲ့ အချိန်မှာ သင်ရဲ့ လေယာဥ် Decending နဲ့ Gliding အရှိန်ကို မြှင့်စေပါတယ်။ သင့်ရဲ့ လေယာဥ်မှဆင်းစဥ် လေထီးထိန်းချုပ်မှုကို ပိုမိုကောင်စေပါတယ်။
FF pack ရဲ့ နောက်ဆုံးထည့်သွင်းထားတဲ့ Smooth Gloo Ability နဲ့ အလွန်မိုက်တဲ့ ပင်ဂွင်းဘဲဖြစ်ပါတယ်။ Mr Waggor က စက္ကန့် ၁၂၀/၁၀၀/၁၀၀ တွင်တိုင်းမှာ Gloo Wall လက်ပစ်ဗုံးထပ်မံ ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဂိမ်းပြီးခါနီး လောနေချိန်လောက်တွေမှာ အသုံး၀င် ပါတယ်။
တို့ရဲ့ အကြိုက်ဆုံးတွေကတော့ Shiba ၊​ Detective Panda နဲ့ Falco တို့ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ နောက် ဘယ်အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်လေးတွေကို မွေးမှာလည်း? တို့ကိုပြောပြပါ!
Free Fire အကောင့်ကို Condashop မှာဘဲ ဖြည့်လိုက်ပါ။ #BetterFasterSafer Top Up Expereinces အတွက် ငွေပေးချေစနစ်မျိုးစုံနဲ့ အာမခံမှုပေးပါတယ်။
Previous articleFree Fire မွာရွိတဲ့ Elite Pass ဆိုတာ ဘာလဲ
Next articleကဲကဲ ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ PUBG ပရိသတ်ကြီးကို PUBG Mobile Lite က Zombies တွေ နဲ့ မနက် အချိန် အထိ ဘယ်လိုအသက်ရှင်အောင်နေကြမလည်း ဆိုတာကိုပြောပြမှာဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။